‘हामी सपनाको राजनीति होइन यथार्थतामा विश्वास गर्छौ’
रमेशकुमार पुडासैनी, उम्मेदवार विवेकशील साझा पार्टी, काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ३, क प्रदेशसभा
रमेशकुमार पुडासैनी कम्युटर इञ्जिनीयर हुन्,उनी softwarica college मा प्राध्यापनरत पनि छन् । अहिले उनी त्यो काम छोडेर चुनावी घरदैलोमा व्यस्त छन् । काठमाडौं क्षेत्र नं ३ को प्रदेशतर्फ ‘क’ बाट प्रत्यक्ष तर्फ विवेकशील साझा पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका उनी राजनीतिलाई समाज सेवाका रुपमा अथ्र्याउछन् । भन्छन ‘खासमा नेपालमा राजनीति भएकै छैन यो त जनताको सेवा गर्ने काम हो ।’ आफ्नो पार्टी जनताका प्रत्यक्ष समस्यासँग समाधान गर्न निरन्तर लागि पर्ने र सु–संस्कृत राजनीति गर्ने उनी बताउँछन् । काठमाडांै बौद्धमा जन्मनु भएका पुडासैनीले प्रारम्भिक शिक्षा कुमारी शिशु सदन हँदै कुमारी आवासीय उच्च माध्यामिक विद्यालयबाट पुरा गरेका हुन् । भारतको लर्ड बुद्ध एडुकेशन फाउन्डेसनबाट एमएस्सी आईटी गरेका छन् । चुनावी माहोलका र घरदैलो विषयमा केन्द्रित भएर नारायणी लामिछानेले पुडासैनीसँग गरेको कुराकानी ः
तपाई आइटी इञ्जिनीयर शिक्षण पेशामा पनि आवद्ध हुनुहुन्छ राजनीतिमा किन आउनु भयो ?
म यसलाई राजनीति भन्दिन,यो वास्तवमा समाज सेवा हो । हामी वर्तमान समयमा भईरहेको राजनीतिको वैकल्पिक पार्टीका रुपमा आम जनसमुदायका माझ आएका छौं । विवेकशील साझा पार्टीको जन्म नै वैकल्पिक शक्ति स्थापनका लागि भएको हो । नेपाली राजनीतिमा जुन किसिमको धनवाद, नातावाद, परिवारवाद छ त्यस्तो र कुसंस्कार तोडनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र हाम्रो पार्टीको मुख्य लक्ष्य नै त्यही हो । जनतालाई पूर्ण सेवासुविधा दिने, देशभित्र नै स्वरोजगारी सिर्जना, संम्वृद्धि र विकास गर्नु, व्याप्त भ्रष्टचार कम गर्न हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । म शिक्षक भएर पनि समाजसेवा नै गर्दै थिए र अहिले राजनीतिमा लागेर पनि समाज सेवा गर्दै छु । त्यसैले म मेरो उम्मेदवारीलाई राजनीति भन्दा पनि समाज सेवाकै एउटा हिस्साका रुपमा अथ्र्याउने गर्छु ।
चुनाव आउने लाग्यो, प्रचारप्रसारमा कतिको जुटनु भएको छ ?
अहिले हामी चुनावको संघारमा छौ, यस समयमा चुनावमा नजुट्ने त कुरै भएन । हामी सर्वप्रथम आफ्नो आफन्तकोमा, आफ्नो छरछिमेकमा र आफ्नो क्षेत्रमा प्रचारप्रसारमा जुटेका छौ, आमसर्वसाधारण सम्म जाने गरेका छौ र उहाँहरुको सुझाव लिईरहेका छौ । मतदाताको धारणा बुझने र उनीहरुका समस्या टिपोट गर्ने कार्यमा व्यस्त छौं ।
सबै दलका नेता चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्, तपाईको अवस्था के छ ?
युद्ध लडने व्यक्ति हार्छु भनेर कहिले पनि लाग्दैन, त्यस्तै सबै जित्छौ भनेर नै मैदानमा उत्रिएका हुन्छन् । तर, जनताले कसलाई जिताउँछन त्यो त परिणामले देखाउने हो । अहिलेको जनताले वास्तवमै परिवर्तन खोजिरहेका छन् । पुराना राजनीतिक शक्तिले आश्वासन बाड्नेमा काम गरे । अब हामी काम गरेर देखाउँछौं भनेर भोट मागिरहेका छौ । त्यसैले विस्तारै माहोल हाम्रो पक्षमा बन्दै गएको हाम्रो बुझाई छ । हामी सपनाको राजनीति होइन यथार्थतामा विश्वास गर्छौ । पक्कै पनि यो पुस्ताले नयाँ आवाश्यकता नै खोज्ने छ । हामी ठुलो काम गर्छौ भन्दैनौ तर साना कामले सुसंस्कृत राजनीति को विकास गर्छौ ।
चुनाव जितेपछि यस क्षेत्रको विकासका लागि के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
विशेषत चुनाव जितेपछि नीति निर्माणमा मेरो नेतृत्वदायी भूमिका हुनेछ, त्यस्तै शिक्षा स्वास्थ लगायतका क्षेत्रमा जस्तै सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र संम्वर्दनमा जोड दिने छु । सांस्कृतिक सम्पदालाई चिनाउनको लागि पदमार्गको व्यवस्था गर्दै पर्यंटनको विकासमा जोड दिनेछु । वौद्ध क्षेत्र हाम्रो अन्र्तराष्ट्रिय चिनारीको क्षेत्र हो । त्यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउने मेरो प्रयास हुनेछ । अन्य सांस्कृतिक सम्पदालाई समेत जगेर्ना गर्नको लागि पदमार्गको व्यवस्थापनमा जोड दिनेछु । क्षेत्र नं ३ क मा पर्ने वडा कार्यलयहरु प्रादेशिक सरकार र केन्दी«य सरकारसँग समन्वयन गर्दै क्षेत्रको विकासका लागि पहल गर्नेछु ।
प्रकाशित ८ मङ्गसिर २0७४ , शुक्रबार | 2017-11-24 10:30:50